Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း)
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Doxycyclineကိုဝက်ခြံဖြစ်စေသောပိုးအပါအဝင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းများကိုကုသရန်နှင့် ဌက်ဖျားရောဂါကိုကာကွယ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။၎င်းသည် Tetracycline အမျိုးအစားပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီးပိုးမွှားများကြီးထွားမှုကိုရပ်တန့်ပေးသည်။ Doxycycline သည်ဘက်တီးရီးယားကိုသာနှိမ်နင်းနိုင်ပြီးအအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုမနှိမ်နင်းနိုင်ပါ။ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားမှားသုံးမိလျှင်ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်ဘဲသုံးမိလျှင်ဖြစ်စေထိရောက်သောအာနိသင်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Doxycycline ကိုအစာမစားခင် သို့မဟုတ် အစာနှင့် ၁-၂နာရီခွာ၍တစ်နေ့လျှင် ၁-၂ကြိမ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ရေများများနှင့်သောက်ရမည်။ (၂၄၀ မီလီ/ ၈အောင်စ ခန့်)
ဗိုက်ထဲတွင် တခုခုခံစားရပါကအစာ ၊ နွားနို့သို့မဟုတ် ကယ်လ်ဆီယံဓါတ်များသောအစားအစာတို့နှင့်တွဲ၍သောက်နိုင်သည်။ မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အလူမီနီယမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ သံဓါတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဇင့် (သို့) bismuth subsalicylate ပါသောအရာများနှင့် ၂-၃နာရီခြားပြီးသောက်ပါ။ ဥပမာအစာအိမ်လေဆေး၊HIVဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေး၊ အားဆေး၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ကယ်လ်ဆီယံဓါတ်များသောအစားအစာတို့ဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် ခန္ဓါကိုယ်မှ ဆေးစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေသည်။
ဌက်ဖျားရောဂါကိုကာကွယ်ရန် Doxycycline ကို ၁နေ့ ၁ကြိမ်သောက်ရသည်။ ခရီးမထွက်မီ ၁-၂ ရက်အလိုသို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းသောက်ပါ။ ဌက်ဖျားရှိသောနယ်မြေသို့ရောက်လျှင် ဆက်သောက်ပါ။ ခရီးမှအိမ်ပြန်ရောက်သည့်တိုင် ၄ပတ်ခန့်ဆက်သောက်ပါ။ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်ဆေးဆက်မသောက်နိုင်ခဲ့လျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးအရည်ဆိုပါကဆေးမသောက်မီလှုပ်သောက်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသောဇွန်း ဖြင့် သောက်ပါ။ အိမ်သုံးဇွန်းဖြင့်မသောက်ရ။ ဆေးပမာဏသည် သင့်ရောဂါအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကလေးငယ်များတွင်မူကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပိုးသတ်ဆေးဟူသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင်ရှိမှ ဆေးအာနိသင်ကိုရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးကိုမှန်မှန်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ခံစားနေရသော ဝေဒနာများပျောက်သွားသည့်တိုင်အောင်ဆေးညွှန်းရက်ပြည့်သည် အထိဆက်သောက်ရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ဘက်တီးရီးယားများပြန်ပွားကာရောဂါပြန်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင့်ရောဂါမသက်သာ၊ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်ထံပြပါ။
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ Doxycyclineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Doxycyclineကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Doxycyclineဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Doxycyclineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းတော့ မပြုလုပ်ရပါ။ Doxycyclineကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Doxycyclineမသောက်ခင် ဆရာဝန်နှင့်အောက်ပါ အချက်များရှိလျှင်တိုင်ပင်ပါ။
• မိမိတွင် doxycycline၊ minocycline၊ tetracycline၊ sulfites (doxycyclineအရည်)၊ အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်
• အခြားမိမိသဘောနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ညွှန်ကြားထား၍သော်လည်းကောင်းသောက်နေသောဆေးများရှိလျှင်၊ လေဆေးများ၊ သွေးကျဲဆေးများ warfarin (coumadin)၊အတက်ပျောက်ဆေး(carbamazepine၊ phenobarbital၊ phenytoin (dilantin) နှင့် အားဆေးများသောက်နေလျှင်
• ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိလျှင်
• Doxycycline သောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင်၊ ကလေးယူရန်စီစဉ်ထားလျှင်
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၊ ကလေးအသက် ၈နှစ်အထိသောက်လျှင် ကလေး၏သွားများအရောင်ညစ်သွားခြင်းတသက်လုံးဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးအသက် ၈နှစ်အောက်နှင့် ထောင့်သန်းရောဂါ(Anthrax)ရောဂါများတွင်သာဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသောက်သင့်သည်။
• Doxycycline သည် ကိုယ်ဝန်တားဆေး(သောက်ဆေး)၏အာနိသင်ကိုပျက်စေသဖြင့် အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်တားသင့်သည်။
• အစာအိမ်လေဆေး၊ကယ်လ်စီယမ်အားဖြည့်ဆေး၊ သံဓါတ်အားဆေး၊မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါသောဝမ်းနှုတ်ဆေးတို့နှင့်တွဲမသောက်ရ။
• Sodium bicarbonate ပါဝင်သောအစာအိမ်လေဆေး၊ ကယ်လ်စီယမ် အားဖြည့်ဆေး၊ သံဓါတ်အားဆေးတို့နှင့် ၁-၂ နာရီခြားသောက်ပါ။ မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါသောဝမ်းနှုတ်ဆေးတို့နှင့် ၃-၄ နာရီခြားသောက်ပါ။
• သွားနှင့်ဆိုင်သောခွဲစိတ်မှုများအပါအဝင် အခြားသောခွဲစိတ်မှုများလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် Doxycycline သောက်နေကြောင်း ဆရာဝန်အားပြောပါ။
• Doxycycline သောက်နေစဉ် နေရောင်ကာခရင်မ်၊ မျက်မှန် နှင့် လုံခြုံသော အဝတ်အစားများကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပါ။
• Doxycycline ကိုဌက်ဖျားကာကွယ်ရန်သောက်နေရလျှင် သင့်ကိုယ်သင် ခြင်ကိုက်မခံရအောင် ဆေးလိမ်ခြင်း၊ ခြင်ထောင်ထောင်အိပ်ခြင်း၊ ခြင်လုံဇကာတပ်ဆင်ခြင်း(အထူးသဖြင့် ညနေစောင်းမှ အာရုံတက်ချိန်အထိ) ဖြင့်နေထိုင်ပါ။Doxycyclineသည် ဌက်ဖျားကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Dရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တွေ့ရလေ့ရှိသောလက္ခဏာများမှာ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အင်ပြင်ကဲ့သို့အနီဖုများထခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ မျက်နှာနှုတ်ခမ်းနှင့်လျှာတို့ ဖောင်းလာရောင်လာခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါကအရေးပေါ်ဆေးခန်းသို့သွားပြရမည်။
• ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ခေါင်းမူးခြင်းနှင့် အမြင်မှုန်ဝါးလာခြင်း
• တုပ်ကွေးကဲ့သို့ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လည်ချောင်းနာပြီးဖျားခြင်း
• ပုံမှန်ထက် ဆီးသွားနည်းခြင်း
• သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းအရည်များသွားခြင်း
• ဖြူဖျော့လာခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ဆီးအရောင် မဲမဲသွားခြင်း၊ ဆီးနောက်ခြင်း နှင့် ဆီးတွင်သွေးပါခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
• ကျောနှင့်ရင် ညှပ်အောင့်ခြင်း၊ပျို့အန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း
• အနီဖုများထခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ မျက်နှာနှုတ်ခမ်းနှင့်လျှာတို့ ဖောင်းလာရောင်လာခြင်း(မျက်နှာနှင့်ကိုယ်ပေါ်တွင်)၊၎င်းတို့အရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ကာပေါက်ထွက်ခြင်း၊ အဖတ်ဖတ်ကွာကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိနိုင်ပါသေးသည်။ Doxycyclineသောက်သူတိုင်းထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရသည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Doxycycline သည် မိမိယခုလက်ရှိသောက်သုံးနေသောဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်များပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလည်းပိုဆိုးစေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြာင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဓါတ်မတည့်မှုများကိုလျှော့ချရန် သင်သောက်နေသောဆေးများ (ဆေးညွှန်းပါ/မပါသောဆေးများ၊တိုင်းရင်းဆေးများ)ကိုစာရင်းလုပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများကိုမိမိသဘောနှင့်အတိုးအလျှော့ပြုခြင်း၊ဆေးဖြတ်လိုက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါ။
Acitretinဆေးနှင့် Doxycycline တွဲသောက်ရန်ဆရာဝန်မှ မထောက်ခံပါ။ သင်သည် ဆေးတမျိုးမျိုးကိုပြောင်းသောက်ရနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါဆေးများသည် Doxycycline နှင့်တွဲမသောက်သင့်သောဆေးများဖြစ်သော်လည်းတွဲသောက်ဖို့လိုအပ်လာသောအခြေအနေမျိုးတွင် မဖြစ်သင့်သည့်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏနှင့် သောက်ရမည်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုညှိပေးလိမ့်မည်။ အောက်ပါဆေးများသောက်နေပါကသင့်ဆရာဝန်အားပြောပါ။
Amoxicillin, Ampicillin, Bacampicillin, Bexarotene, Cloxacillin, Dicloxacillin, Digoxin, Etretinate, Isotretinoin, Methicillin, Methotrexate, Nafcillin, Oxacillin, Penicillin G, Penicillin G Benzathine, Penicillin G Procaine, Penicillin V, Piperacillin, Pivampicillin, Sultamicillin, Temocillin, Tretinoin.
Aluminum Carbonate, Basic, Aluminum Hydroxide, Aluminum Phosphate, Bismuth Subsalicylate, Calcium, DihydroxyaluminumAminoacetate, Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate, Iron, Magaldrate, Magnesium Carbonate, Magnesium Hydroxide, Magnesium Oxide, Magnesium Trisilicate, Rifampin, Rifapentine
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Doxycycline က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းကိုပို၍အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Doxycycline ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောက်ပါကျန်းမာရေးပြသနာများရှိပါကသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
• ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွင် sodium metabisulfite ပါဝင်သောဆေးVibramycinသည် ဆိုးရွားပြင်းထန်သောဓါတ်မတည့်ခြင်းအထိဖြစ်စေနိုင်သည်။
• မိန်းမကိုယ် မှိုစွဲခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပထမဆုံးနေ့တွင် 200mg (100 mg တနေ့ ၂ကြိမ် သို့မဟုတ် 50mg တနေ့ ၄ကြိမ်) နှင့် နောက်နေ့များတွင် 100 mg တစ်နေ့ ၁ကြိမ် သို့မဟုတ် 50mg တနေ့ ၂ကြိမ် ဖြစ်သည်။
နာတာရှည်ကူစက်ရောဂါများနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတို့အတွက်မူ 100 mg တနေ့ ၂ကြိမ်ထိတိုးသောက်နိုင်သည်။
• ဆီးပူညောင်းကျခြင်း (အမျိုးသားများတွင် စအိုတဝိုက်တွင်ဖြစ်သောရောဂါများမပါ) 100mg တနေ့၂ ကြိမ် ၇ရက်။ သို့မဟုတ် 300 mg သောက်ပြီးနောက် ၁နာရီကြာလျှင် 300mg ထပ်သောက်ရန်။
• N. gonorrhea ကြောင့်ဖြစ်သောလိင်အဂါၤနှင့် ကပ်ပယ်အိပ်ရောင်ခြင်းအတွက် 100mg တနေ့၂ကြိမ် အနည်းဆုံး ၁၀ရက်
• ကာလသားရောဂါ(ပထမ၊ ဒုတိယ) အတွက်300mg တနေ့၃-၄ကြိမ် အနည်းဆုံး ၁၀ရက်
• ChlamydiaTrachomaticsအကောင်ကြောင့်ဖြစ်သော ဆီးပိုးဝင်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်းရောင်ခြင်း၊ စအိုပိုးဝင်ခြင်း၊ တို့အတွက် 100mg တနေ့၂ ကြိမ် အနည်းဆုံး ၇ရက်
• ChlamydiaTrachomaticsနှင့် U. urealyticumအကောင်ကြာင့်ဖြစ်သောဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက် 100mg တနေ့၂ ကြိမ် အနည်းဆုံး ၇ရက်
• ChlamydiaTrachomaticsအကောင်ကြာင့်ဖြစ်သောလိင်အဂါၤနှင့် ကပ်ပယ်အိပ်ရောင်ခြင်းတို့အတွက် 100mg တနေ့၂ ကြိမ် အနည်းဆုံး ၇ရက်
• လေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောထောင့်သန်းရောဂါအတွက် လူကြီး – 100mg တနေ့၂ ကြိမ် ၂လ ၊ ကလေး- ၄၅ကီလိုဂရမ်ဆိုလျှင် 2mg/kg တနေ့၂ ကြိမ် ၂လ ၊ ၄၅ ကီလိုဂရမ်ထက်ကျော်လျှင် လူကြီးအတိုင်းသောက်ရန်။
• Streptococcal အကောင်ကြောင့်ဖြစ်လျှင်၁၀ ရက်ဆက်သောက်ပါရန်
ကလေးတွေအတွက် Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၈နှစ်အောက် ၊၄၅ ကီလိုဂရမ်အောက် အလေးချိန်ရှိကလေးအတွက် 5mg/kg/day တနေ့ ၁-၂ကြိမ် ။ တနေ့လျှင် အများဆုံးသောက်နိုင်သောပမာဏ၂၀၀ mg ။
Doxycycline (ဒေါ့ဆီဆိုက်ကလင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
• ဆေးတောင့် ၂၀ မီလီဂရမ် ၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်
• ဆေးတောင့် ၅၀ မီလီဂရမ် ၊ ၇၅ မီလီဂရမ် ၊၁၀၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၅၀ မီလီဂရမ်
• အာနိသင်တဖြေးဖြေးရရှိသောဆေးတောင့် ၄၀ မီလီဂရမ် ၁၀၀ မီလီဂရမ်
• အကြောထိုးဆေး ၁၀၀ မီလီဂရမ်
• သောက်ဆေးအရည် ၆၀မီလီဂရမ်/ ၅မီလီ
• သောက်ဆေးအရည် ၂၀ မီလီဂရမ် ်၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်
• သောက်ဆေးပြား၅၀၊၇၅၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်
• အာနိသင်တဖြည်းဖြည်းရရှိသောသောက်ဆေးပြား ၅၀၊၇၅၊ ၁၀၀၊၁၅၀ မီလီဂရမ်
Doxycyclineကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
1. Doxycycline(OralRoute).http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/doxycycline-oral-route/description/drg-20068229. 22/06/2016
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အေရျပားက်န္းမာေရး, လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အလှအပ, အလှအပ